China Dropout Cutout High Voltage Compound Fuse mpanamboatra sy mpamatsy | Histe
Ny fuse dropout dia misy mpanohana insulator sy fuse Tube. Ny fifandraisana statika dia raikitra amin'ny lafiny roa amin'ny fanamafisana ny insulator ary ny fifandraisana mifindra dia apetraka amin'ny faran'ny fantsona fuse roa. Ny fuse fuse dia misy ny fantsom-pamonoana arc, fantsom-pamokarana phenolic ivelany na fantsom-baravarankely epoxy. Raha te hifandray amin'ny mpamatsy tsipika fizarana izy io dia miaro indrindra ny mpanova na ny tsipika avy amin'ny faritra fohy sy ny be loatra, ary ny ony tsy miakatra.
Tongasoa eto hifandray aminay amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Ny antsipiriany sasany dia azo baikoina arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
1. fiarovana azo antoka amin'izao fotoana izao.
2. endrika maoderina sy matevina.
3.tanjaka mekanika avo.
Fepetran'ny tontolo iainana fanompoana
1.Ny fepetra ara-dalàna momba ny serivisy: ny mari-pana manodidina dia tsy avo mihoatra ny +40 degre, tsy ambany noho ny -40 degre;
Altitude tsy mihoatra ny 1000m;
Ny hafainganam-pandehan'ny rivotra avo indrindra dia tsy tokony hihoatra ny 35m / s;
Tsy nihoatra ny 8 degre ny horohorontany.
2.Ny vokatra dia tsy azo ampiharina amin'ireto toerana manaraka ireto:
Toerana atahorana hodorana na hipoaka;
Toerana misy fihoaram-pefy na fiatraikany mahery vaika;
Fanodinana herinaratra, hetsiky ny gazy simika ary faritra misy zavona masira mandoto.
Fuse Cutout miaraka amin'ny Porcelain Base no tena ampiasaina hiarovana ny tsipika fizarana sy ny «transformeur» manoloana ny fahavoazana be loatra sy ny lalan-kely. Izy io koa dia mety ho switch disconnection overhead miaraka amin'ny fampiasana fitaovana enta-mavesatra entana. Ny fanapahana fuse dia novolavolaina mba hifanaraka amin'ny fepetra sy fampiharana mahazatra ary nandalo ny fitsapana karazana laboratoara KEMA.
Type Naoty naoty
(KV) Naoty ankehitriny
(A) Mpamadika faritra
fahaizana 3-dingana (MVA) Famakiana max
amin'izao fotoana izao (KA) Over voltage No.
(H) RWX10-35 / 0,5 35 0,5 2000 28 Raha tokony ho in-2.5
(H) RWX10-35 / 3 35 3 2000 28 Raha tokony ho in-2.5
(H) RWX10-35 / 5 35 5 2000 28 Raha tokony ho in-2.5
Previous: Famaranana hafanana mihena ny famaranana ny tariby
Manaraka: Wholesale Insulator vita amin'ny sandrin'ny vokatra vita amin'ny vokatra sinoa